बाम एकतामा ज–जसले विदेशीको भूमिका देखे | नेपाल आज
बाम एकतामा ज–जसले विदेशीको भूमिका देखे
काठमाडौं । एक आपसमा कट्टर विरोधी दलहरु एकाएक एकता प्रक्रियामा आएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो, लिने क्रम जारी छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचको तालमेल एवं एकता प्रयासले धेरै विश्लेषकहरु आश्चर्यमा परे । ‘यो जुनीमा प्रचण्डसँग सहकार्य सम्भव छैन’ भनेर केही दिन अघि मात्रै बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरेका थिए । ‘नयाँ शक्तिमा म मात्रै बाँकी रहेँ भने पनि अन्त जान्नँ’ भन्ने पनि बाबुराम थिए ।
तीनै दलका नेताहरुले यो बीचमा यति धेरै बोलिसकेका थिए कि उनीहरुलाई अहिले ‘बोलीको ठेगान र व्यवहारमा इमान नभएका’ भन्दा फरक पर्दैन । केपी ओलीले त २२ वर्षदेखि अनवरत माओवादीको आलोचना मात्रै गरे । प्रचण्ड के कम, उनले पनि केपी ओलीलाई नाम नै तोकेर ‘कम्युनिष्टका नाममा कलंक र गद्दार भनेका थिए ।’
आकस्मिक रुपमा उनीहरु चुनावी तालमेल र पार्टी एकतामा जाने विषय अगाडि आएपछि यो कसरी सम्भव भयो ? भनेर एकाथरीको टाउको दुखेको छ । केही विश्लेषकले भने विभिन्न कोणबाट अनुमान गरिरहेका छन् । विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीको मतमा अहिलेको ध्रुवीकरणमा मोदीका दुश्मनहरुको हात छ । उनी भन्छन्, ‘भारतका सीताराम यचुरी, मणिशंकर ऐय्यर, ‘र’का पुराना जासुस आदिको हात छ । यहि शक्तिले नेपालमा संविधान जारी गर्न सहयोग गरेको थियो ।’
नाकाबन्दीको समयमा केपी ओलीले मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने मोदीको मिसन ओलीले नै विवादमा पारिदिए – किनभने मोदी सरकार नेपालमा संविधान जारी नहोस भन्ने चाहन्थ्यो । त्यो केपी ओलीले हुन दिएनन् । त्यसैको प्रतिशोध पाँच महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी थियो ।
यो विगतका आधारमा केपी ओलीका कदममा मोदी विरोधीले सहयोग रहेको विश्लेषण सुवेदीको हुन सक्छ । सुवेदी भन्छन्, ‘अब अरुले यो एकतामा चीनको संलग्नता छ भन्नेहरु पनि जन्मिनेछन् ।’
१२ बुँदे सहमति पछि सुरु भएको राजनीतिको कोर्स अबका दुई निर्वाचनपछि समाप्त हुनेछ । राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको मतमा राज्यको पुनर्संरचना, संविधान सभा जस्ता विषय जसले बोकाएका थिए त्यो मिसन चुनाव पछि सकिन्छ । यो प्रशंगलाई बाम एकतासँग जोड्दै उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन पछि कसरी नेपाललाई अर्को भड्खालोमा जाक्ने ? साम्राज्यवादीहरुले नयाँ भड्खालो सिर्जना गर्न यिनीहरुलाई मिलाएको हो ।’
एमालेसँग मिसिनु प्रचण्डकालागि बाध्यत्मक स्थिति पनि थियो । लुटेको धन जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनबाट जोगिन प्रचण्डले शक्तिको केन्द्रमा बस्नै पर्ने हुन्छ । नत्र लुटेको धनमा अख्तियारले समाउँछ । मान्छे मारेको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभिनु पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले पाएको मतअनुसार उसले केन्द्रमा १७ सिट मात्रै जित्ने विश्लेषण भइरहेको थियो । १६५ प्रत्यक्ष मध्ये माओवादी १७ मा सिमित हुँदा उसको औकात निकै सानो हुन्थ्यो । यस्तो बेला अख्तियारले प्रचण्डलाई सजिलै न्याकेर विशेष अदालतमा पुर्याउन सक्थ्यो । दाहाल भन्छन्, ‘लुटेको सम्पत्ति जोगाउन र १७ हजार मारेको अपराधबाट जोगिन प्रचण्ड ओलीसँग मिसिन पुगे ।’
एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीको विचारमा केपी ओलीलाई साइजमा राख्न वाम एकता भएको हो । कुराको चुरो खुलाउँदै भन्छन्, ‘एमालेमा भारतको पृष्ठपोषक माधवकुमार नेपाल हुन् । प्रचण्ड मिसिए, उनी पनि भारतकै हुन् । एकैठाउँमा आएपछि माधव र प्रचण्ड मिल्छन्, अनि केपीलाई निकालिदिन्छन् । यसकारण यसमा भारतको हात हुन सक्छ ।’
विश्लेषक प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी पनि बाम एकतामा कुनै शैद्धान्तिक विषय कारक नभएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘दलका नेताहरुको सत्ता र स्वार्थ पूरा हुने, विदेशीले पनि नेपालको अव्यवस्थामा खेल्न पाउने भएपछि दुवैको जोडबलमा यसो भएको हो ।’